Shiinaha warshad xawaare sare leh oo shiinaha ah | Taariikh
SARIIRTA xawaaraha SARE ee loo yaqaan Rolled Round bar
Xawaaraha Sare ee Flat Flat
Xawaaraha Sare ee Xawaaraha Sare ee Dhimashada
Xaashida Xawaaraha Sare
Caabbinta dharka oo aad u wanaagsan
Cadaadiska cadaadiska sare
Xayawaanada Xawaaraha Sare ayaa loo magacaabay si ay u muujiyaan awooddooda inay iska caabiyaan jilicsanaanta heerkulka sare sidaas darteedna ay u ilaalinayaan jarista fiiqan marka goosgoosyada ay culus yihiin oo xawaaruhu sarreeyaan. Iyagu waa kuwa aad u sarreeya ee dhammaan noocyada birta aaladda. Waxay caadi ahaan ka kooban yihiin tiro aad u tiro yar oo ah tungsten ama molybdenum, chromium, Cobalt iyo vanadium, oo ay weheliyaan kaarboon.
Laba kooxood ayaa la heli karaa: Noocyada Molybdenum iyo Noocyada Tungsten
MOLYBDENUM birta qalabka xawaaraha sare ku jirta waxay ka kooban tahay 3.50 ilaa 9.50% molybdenum. Dabeecad ahaan waxay ka kooban yihiin 4.00% tungsten, iyo 1.00 ilaa 5.00% vanadium. Kaarboonku aad ayuu u sarreeyaa-0.80 ilaa 1.50%. Codsiyada waxay daboolayaan qalab ballaaran oo goyn ah. Tusaalooyinka waxaa ka mid ah: layliyo qalloocan, reameriyayaal, goynta mashiinnada wax lagu jaro, lathe iyo aaladaha wax lagu qorsheeyo, mindiyo goynta, iyo guntinyada gogosha.
DUNIDA birta qalabka xawaaraha sare leh waxay leeyihiin 12.00 ilaa 20.00% tungsten. Waxay sidoo kale leeyihiin xaddi badan oo chromium iyo vanadium, qaarna waxay leeyihiin xaddiyo badan oo kobalt ah. Kaarboonku wuu sarreeyaa-0.70 ilaa 1.50%, waxay kuxirantahay darajada. Adeegsiga qalabku wuxuu ka kooban yahay qaniinyo, layliyo, reamerro, qasabado, maraqyo, goynta mashiinnada wax lagu shiido, hobs, feedho, iyo dhimasho.
Guud ahaan SIDII KHUDBADDA SARE EE Darajada No. Waxaan Bixinnay:
Isku-dhafnaan heer sare ah oo iska caabin ah, adkeysi iyo adkaansho kulul. Awood adag oo cadaadis leh oo loogu talagalay iska caabinta cilladaha, yareynta u nuglaanshaha, ilkaha iyo wareejinta gees.
Dhammaan noocyada kala duwan ee xirmooyinka iska caabbinta ee keena gariirka, Sida aaladaha Lathe, Qalabka Qorsheeyaha, Daloolinnada, Qasabadaha, Reamers, Baroorro, Mashiinka wax gooya, Foomka jaraya, Fiilooyinka kala go ', Dhagaxleyda dhamaadka, Gear jaraya
Cobalt waxay ku dartay M2 birta xawaaraha sare leh taas oo kudarka kuulku bixinayo adkaanta kulul, Adkeysiga kulul ee fiicnaaday wuxuu ka dhigayaa birta ku habboon farsameynta birta birta sare leh iyo kuwa hore loo sii diyaariyay,
Layliyo maroojin ah, qasabado, goynta shiidi, reamers, maraq, miinshaaro, mindiyo, iyo hobs.
A steel kolbalt xawaare sare leh oo aad u adag oo adag oo qallafsan oo kulul, iska caabin xirasho aad u fiican iyada oo loo eegayo qallafsanaanta kuleylka sare, ku foogow oo ku adag codsiyada goynta culus iyo wax soo saarka sare.
Qalabyada goynta adag ee saxda ah ee goynta xawaaraha adag iyo xawaaraha sare, layliyada qalloocan, qasabadaha, goynta qodista, reamers, broaches, miinshaaro, mindiyo, iyo dunta rogista way dhimataa.
Hung ku saleysan Tungsten, HSS isku dhafan oo wanaagsan iyo adkaanta cas. Caabbinta sare ee xirashada iyo jilicsanaanta. Ehel ahaan fududahay in la adkeeyo.
Layliyo maroojin ah, qalabka jarista qalabka, mashiinnada goynta, qalabka wax lagu gooyo ee faylasha, qalabka lathe, qalabka qorsheeyaha, qalabka xiirashada.
Hore: SHAQADA SHAQADA QABOW
Xiga: MARKII XARUNTA EE BARTA 1.2344-H13
Qaybiye Xawaare Sare
Xawaaraha Sare ee Birta ah
Bixiye Xawaare Sare
Bixinta Xawaaraha Sare
Hss M35 Wareegyada Sawirada Wareegtada ah, Hss M2 Wareegyada Sawirada Wareegtada ah, Mashiinka Mashiinka Wareegga Wareega ah, Qalabka Shaqada kulul ee Birta Lagu Dhejiyo, Tct Wareegga Mashiinka Loogu Talagalay Birta, Tct Wareegga Wareegga Sawirka,